ဘလော့ဂါ၏သွေးသည် SEO မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်ပျံ့နှံ့စေခြင်းဖြစ်သည် Martech Zone
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 30, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
Christina Warren ကတင်ပြခဲ့သည်:
ကျွန်ုပ်တို့အတွက်၊ ယခုအပတ်တွင်ဖော်ပြထားသော SEO တိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားသည်နေ့စဉ်ဘလော့ဂါများ / ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှနေ့စဉ်အနည်းငယ်သာဝေးကွာသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြိုးစား။ သူတို့၏ site ကိုပိုမိုထိရောက်စွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းငယ်အပိုဒေါ်လာပါစေ။ သငျသညျဖြောင့် -up, လိမ်လည်မှု link-farm ကို run သို့မဟုတ်အလွန်ကံကောင်းပါစေမဟုတ်လျှင် - ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရာထူးသည်အကြောင်းအရာမရှိခဲ့ပါကရေရှည်အကျိုးကျေးဇူးများခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
တစ်ခုက Angry Wolf က
အပြည့်အဝ post ကိုမှာမိုက်ကယ်ကနေအတော်လေးအားကြီးသောတုံ့ပြန်မှုတယ် Graywolf ၏ SEO ဘလော့ဂ်စာသားအရ Christina သည်ညည်းညူသောလူထုံဖြစ်သည်။ ဒီလိုမျိုးဘာသာစကားကအရမ်းအားကောင်းတယ်၊ ခရစ္စတီးနာကိုငါကိုယ်တိုင်မတိုက်ခိုက်တော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူမရဲ့ post ကငါလိုလူမျိုးတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာငါပြောလိမ့်မယ်၊ ငါတို့ဘလော့ဂ်တွေကိုစိတ်အားထက်သန်မှု၊ စာဖတ်သူများ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နည်းပညာကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သင့်ဆိုဒ်ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အသွားအလာရှာဖွေခြင်းနှင့်သင်၏ထောင့်စတိုးဆိုင်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်မတူပါ။ သင့်တွင်ကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့်ကြီးမားသောစတိုးဆိုင်တစ်ခုရှိသည်။ စတိုးဆိုင်ကိုအကောင်းဆုံးနေရာတွင်ထားရန်မသင့်လျော်သည်မဟုတ်လော။ ဟုတ်လား ဂိမ်းကစားခြင်း မင်းစတိုးဆိုင်ကိုမင်းဘယ်သူ့ကိုမှရှာမတွေ့နိုင်တဲ့သဲကန္တာရအလယ်မှာထားမထားဘူးလား။
ခရစ္စတီးနာသည်ဂူးဂဲလ်၏လင့်များကိုတိကျစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်စွမ်းရည်ကိုမသိဘဲဖြစ်နေသည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်သင်ကစားချင်တဲ့ဂိမ်းအားလုံးကိုသင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှသင့်ရဲ့ site ကိုကိုးကားနေတယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာအချိန်အကြာကြီးရပ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ လူကြိုက်များမှုသည်ဝဘ်ပေါ်၌အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်၊ ဘလော့ဂါများသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး လူကြိုက်များစေရန်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Google ဖြင့်နေ့စဉ်ရှာဖွေမှုရာပေါင်းများစွာကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်သတင်းအချက်အလက်မရှိပါကစာမျက်နှာအဆင့်မြင့်သောနေရာတွင်မရှိသလောက်ရှားပါသည်။
Blogging လား အခွင့်အလမ်း? လုံးဝ!
အကယ်၍ သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များထုတ်ပေးသောအခွင့်အလမ်းများကို အသုံးချ၍ မရလျှင်၊ ငါမဟုတ်ဘူး ဂိမ်းကစားခြင်း ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာ၊ သော့ချက်စာလုံးရွေးချယ်မှုစသည်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့်စနစ်သည်ကျွန်ုပ်အားဂူဂဲလ်၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့် Yahoo! အတွက်ကော်ဇောနီဆွဲရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ အလွယ်တကူရှာပြီးငါ့အကြောင်းအရာကိုစနစ်တကျစုစည်းဖို့။
ကောင်းသောဆိုဒ်များအားလုံးလိုက်နာသင့်ကြောင်းဂူဂဲလ်ကစာရွက်ကိုရေးခဲ့သည်။ သင်စာရွက်ကိုမလိုက်နာပါကသင်၏ညစာသည်ကျွန်ုပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် crap ကဲ့သို့အရသာရှိသည်ဟုငါ့ကိုမတိုင်ကြားပါနှင့်။ ချက်ပြုတ်ရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ လိုအပ်တဲ့အခါအကူအညီတောင်းပါ။
Tags: အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အီးမေးလ်တိုးမြှင့်အီးမေးလ်ကစာရင်းအီးမေးလ်စာရင်းတိုးမြှင့်ရေတံခွန်ကြော်ငြာ၏သမိုင်းCP တိုင်းတာပါslider ကိုလူမှုရေးထောက်လှမ်းရေးလူမှုမီဒီယာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်လူမှုရေးအကြံပေးချက်များ
ဒီဇင်ဘာ 1, 2007 မှာ 12: 44 AM
Doug: ဒီလိုမှတ်ချက်တွေကမင်းရဲ့ site ကိုပြန်လာတယ်။ အမြင်နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း။ သဲကန္တာရရှိစတိုးဆိုင်နှင့်သင်လုံးဝနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
ကုမ္ပဏီကြီးသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအလွန်အကျွံဖြန့်ဖြူးသည့်အခါသင်၏ဖောက်သည်များထံရောက်ရှိရန်အရေးကြီးသည်မှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ spam ကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်အလွန်မထီမဲ့မြင်ပြုသော်လည်းအကျိုးမရှိ
ဒီဇင်ဘာ 1, 2007 မှာ 9: 14 AM
သင်၏ကြင်နာသောစကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, Bengt! အင်တာနက်ဟာအမှန်တကယ်တန်းတူညီမျှမှုရှိခဲ့တယ်။
ဝီလျံ Caleb ရော့ဂျာ
1:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 38 တွင်
Christina ရဲ့ "gaming" နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်က Black-Hat နည်းစနစ်ကိုသုံးတဲ့သူတွေကိုပိုပြီးရည်ညွှန်းနေသလိုပဲ။ အခြေခံ ဘလော့ဂ် / site ၏ optimization စျေးကွက်သမားအားလုံးသိထားသင့်သည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်“ ဂိမ်း” ကိုမစွန့်ခွာတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သူမအနည်းဆုံးထိုအရာကိုသဘောပေါက်ပြီးအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အခြားအရာများရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
Google ၏စာမျက်နှာများကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်လှသည်။ သို့သော်ထိပ်ဆုံးစာရင်းသည်မကြာခဏစာသားတွင်ဖော်ပြထားသောသော့ချက်စာလုံး (များ) မှလွဲ၍ ရှာဖွေမှုနှင့်များစွာဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
သင် Doug ပြောနေတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ပေမဲ့ခရစ္စတင်းကိုမျှမျှတတလုပ်ချင်တယ်။ သူမဟာသူမလို့မထင်ဘူး စုစုပေါင်း လူထုံ။
1:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 12 တွင်
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြtheနာ, ဝီလျံ။ သူမဘလော့ဂ်တစ်ခုလုံးကိုအတူတကွမြှုပ်နှံပြီးပြandနာမဟုတ်ဘဲဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ဘဲ၊
နည်းပညာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်၊ အထူးသဖြင့်ဘလော့ဂ်နယ်ပယ်တွင် SEO အသုံးပြုခြင်း၊ ဘလော့ဂါများအတွက်မည်မျှကောင်းသည်၊ စာဖတ်သူများ၊ ရှာဖွေသူများ / ပုံမှန်အသုံးပြုသူများအပေါ်အပျက်သဘောမသက်ရောက်စေခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးချက်များစွာရှိသည်။ ဒါမုသားပဲ။
SEO သည်စာဖတ်သူများနှင့်ရှာဖွေသူများအတွက်မကောင်းဘူးလား။ တကယ်လား ၎င်းသည်အားလုံးသောမုသားနှင့်ဘလော့ဂ်များသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပါသလား။ ကျွန်ုပ်၏အကူအညီအများစုသည်ဘလော့ဂ်များမှမဟုတ်၊ ဘရိုရှာများမဟုတ်ပါ။ ရောင်းချသူများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ SEO၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ နည်းပညာများ။
ဘလော့ဂ်တွေဟာကော်ပိုရေးရှင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွေထက်ပိုပြီးပွင့်လင်းရိုးသားပြီးမျှတမှုရှိတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။ ဒါကြောင့်လူတွေကဂူးဂဲလ်ကသူတို့ကိုအစဉ်ဂရုစိုက်ဖို့ဂရုစိုက်တယ်။ ကုမ္ပဏီတွေကဒါကိုမကြိုက်ဘူး။ တကယ်တော့သူတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုဖွင့်ဖို့နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘလော့ဂ်စဖွင့်ဖို့အတင်းဖိအားပေးနိုင်တယ်။
မီဒီယာများသည်တူညီသောအတွေးများကိုတွေးတောလေ့ရှိကြသည်၊ ဘလော့ဂါနယ်ပယ်ကိုအမြဲတမ်းခေါက်။ သူတို့၏အွန်လိုင်းပြonlineနာအားလုံးကိုဘလော့ဂါများအပေါ်အပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ (သူတို့က eBay နှင့် Craigslist တွင်သေဆုံးစေသောကြော်ငြာများကိုအပြစ်တင်သကဲ့သို့) အနည်းဆုံးတော့ Mass Media ကစမတ်ကျလာပြီ၊ အခုသူတို့ blogging လုပ်နေပြီလေ!
ဒါဟာအားလုံးဝယ်လိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားအကြောင်းပါ။ လူတွေဟာဒီအကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုတောင်းဆိုနေတဲ့အတွက် Christina မှာအမှားအယွင်းတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဘလော့ဂါများမှာပြtheနာမဟုတ်ပါ။ အဝိဇ္ဇာ။
PS: ခရစ္စတီးနာဟာ 'လူထုံသူ' လို့မထင်ပါဘူး။ ငါသူမရှာဖွေရေး၏သဘောသဘာဝ, အွန်လိုင်းအပြုအမူများနှင့်မည်သို့စနစ်တကျပြုလုပ်ရန်မည်သို့၏ခိုင်မာသောနားမလည်ရှိသည်မဟုတ်ထင်ပါတယ်။ ငါ Christina လိုရှေးရှေးတွေအများကြီးကိုသိ!
3:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 02 တွင်
အရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်ကောင်းသောအရာနှင့်မကောင်းသောအရာသည်မကောင်း (အကောင်း) အကြားကောင်းမွန်သောမျဉ်းကြောင်းရှိသည်။ လူတိုင်းသည်ထိုကွဲပြားမှုကိုပြုလုပ်ရန်သာဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။ သို့သော် blogosphere နှင့် ပတ်သက်၍ မူအနည်းဆုံးအဆင့်မြင့် seo မဟာဗျူဟာအချို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိပဲဖြစ်ပျက်ရန်တစ်ခုခုခက်ခဲနေသည်။ Matt နှင့်ပတ်သက်သည့်ဘလော့ဂ်ကိုသင်ဖတ်ပါက“ သင်မလုပ်သင့်ပါ၊ သို့သော်သင်ဖြစ်လျှင်…” ဟူသောဖော်ပြချက်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည် - lol 🙂
4:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 10 တွင်
၎င်းသည်“ ဂိမ်းတစ်ခု” နှင့်တူသည်။ အကြောင်းမှာငါတို့ရှိသမျှသည်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူ“ အမီလိုက်” ကစားခြင်းကိုစီရန်ရှိသည်။ မည်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။